Izindaba - IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing antibody Rapid Test isiyatholakala manje
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing antibody Rapid Test isiyatholakala manje
I-Immunobio ithuthukise ngempumelelo i-COVID 19 Neutralizing antibody Test Rapid, kanye nekhithi yokuhlola esivele ine-CE kanye neChina ivunyelwe。
1. IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (i-COVID-19 Ab) eyokusetshenziswa kobuchwepheshe kuphela.
2. Noma yimuphi umsabalalisi kufanele athole imvume noma imvume efanelekile kumasipala wendawo ngaphambi kokungenisa loluhlolo olusheshayo.
3. IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) yakhelwe ngendlela yokuncintisana. Indlela yokuhunyushwa komphumela yehlukile kweye-COVID-19 IgG / IgM test noma i-COVID-19
4. Ukuhlolwa kwe-Antigen. Opharetha kufanele afunde imiyalo yokusetshenziswa ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa isilingo.
5. Inkampani yethu ibhalise lo mkhiqizo nge-CE egunyazwe yi-CIBG. Siphinde sabala lo mkhiqizo kuhlu olumhlophe loMnyango Wezohwebo waseChina.
6. Kunenkathi yezinsuku zokusebenza ezi-5 zokufaka iSitifiketi Sokugunyazwa Kwemibhalo Ekhethekile ekhishwe uphiko lwezempilo nokuhlukaniswa. Amakhasimende ethu afuna ukungenisa lo mkhiqizo kufanele aqinisekise i-oda ngokushesha okukhulu ukunciphisa usuku lokulethwa.
I-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (i-COVID-19 Ab) isivivinyo esisheshayo sokutholakala kwekhwalithi yemithi elwa amandla ne-SARS-CoV-2 noma imigomo yayo egazini lonke, i-serum, noma i-plasma.
Ukusetshenziswa kokuxilonga kwe-in vitro kochwepheshe kuphela.
Ukucaciswa kwephakheji: 20 T / kit, 1 T / kit.
Yini i-SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody?
Amasosha omzimba anciphisa amandla ku-SARS-CoV-2 angama-antibody angavimba ukungena kweselula kwegciwane le-SARS-CoV-2. Ezimweni eziningi, amasosha omzimba anciphisa amandla avimba inhlanganisela ye-RBD ye-S protein kusuka egciwane kuya kuma-ACE2 receptors esitokisini. Uma kwenzeka welulama ngemuva kokutheleleka, noma kugonywe ngempumelelo, ama-antibodies anqandula amandla lawa akhiqizwa futhi anamandla okuvikela kwesinye isikhathi ukutheleleka ngegciwane le-SARS-CoV-2.
Yini inhloso yokuthola ama-antibody ayekisayo?
I-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (i-COVID-19 Ab) isetshenziselwa ukuhlola isimo sokuzivikela kwama-antibody angenangqondo egazini. Isetshenziselwa ukuqapha amandla okuvikela omuntu oyedwa kwigciwane le-SARS-CoV-2.
Ukulwa nomqedazwe we-COVID-19, sinikezela ngemikhiqizo yokuhlola esheshayo elandelayo.
Ukuhlolwa okusheshayo kweCoronavirus COVID-19 IgG / IgM
Ukuhlolwa kwe-SARS-CoV-2 Antigen Rapid (COVID-19 Ag)
Ishidi le-SARS-CoV-2 Antigen Uncut Sheet
I-SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Test Kit
Ishidi elinganqunyiwe le-COVID-19 IgG / IgM